ब्लड प्रेसर जाँच गर्दा के के नगर्ने? – जनस्वास्थ्य खबर
ब्लड प्रेसर जाँच गर्दा के के नगर्ने?
काठमाण्डाै ३०,साउन। सामान्यतया ब्लड प्रेसर (रक्तचाप) जाँच गर्दा स-साना कुरालाइ ख्याल नगर्दा नापमा फरक पर्ने हुन्छ त्यसैले नाप लाइ सहि बनाउनको लागि ब्लड प्रेसर नाप्दा तपसिलका कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ।
हिँडडुल वा व्यायाम गर्ने बित्तिकै नाप्नु हुँदैन ।
हातलाई टेबलमाथि अथवा केहिले सजिलो हुने गरि सपोर्ट दिएर राख्नुपर्छ ।
पहिलोपटक ब्लड प्रेसर दुवै हातमा नाप्नुपर्छ जस्ले गर्दा सहि नाप दिन सकिन्छ।
कोठा को वातावरण शान्त र तापक्रम आरामदायी हुनुपर्छ ।
एउटामाथि अर्को खुट्टा खप्ट्याएर ब्लडप्रेसर परिक्षण नगर्ने ।
लुगाको माथिबाट नप्नुहुदैन जस्ले गर्दा सहि नाप दिन सकिदैन।